MX Snapshot: Ungagadzira sei wega uye inogadzirika MX Linux Pindura? | Kubva kuLinux
Kune vazhinji vedu vane shungu nazvo Linux nyika, kwete chete kuti inofanirwa kuishandisa, asi kazhinji tiri kutsvaga a Kugoverwa kweGNU / Linux yakanaka kana kutsvaga nzira yekuigadzira, kungave kubva pakutanga nenzira dzerudzi LFS (Linux Kubva kuKutanga) kana pahwaro hwekumwe kugovera kukuru uye kwakasimba, senge, Debian, Ubuntu, Fedora uye Arch.
Zvirokwazvo, izvi zvinowanzoda ruzivo rwakadzama uye kushandiswa kwe nyanzvi software zvishandiso, iyo isiri yega yakajairwa uye yepakati mushandisi mushandisi (hofisi / manejimendi) kazhinji anayo. Zvisinei, iyo MX Linux kugovera, iyo yatinotaura nezvayo kazhinji, ine inobatsira, yakapusa uye inoshanda application inonzi MX Mufananidzo, iyo inobvumidza chero chero Linux Mushandisi kugadzira yavo yega, inogoneka MX Linux Pindura.
MX-19.3: MX Linux, DistroWatch nhamba 1 yakagadziridzwa
Kunzwisiswa na Pindura, one bootable (rarama) uye inogadzikana ISO mufananidzo iyo inogona kushandiswa senzvimbo yekudzorera, yepakati yekuchengetedza uye / kana GNU / Linux kugoverwa patsva pakati pevamwe. Naizvozvo, chishandiso ichi chazvino uye chinoshanda chinotsiva chekare, senge «Remastersys y Systemback», asi izvo zvinongoshanda pane yako Native distro, kureva kuti, MX Linux.
Uyewo, MX Linux parizvino zvakare inosanganisira imwe software chishandiso inonzi «MX Live USB Maker (Creador de USB Vivo MX)» ane chinangwa chekunyora iyo «Imagen ISO» inogadzirwa kubva parizvino, yakagadzirirwa uye yakagadziridzwa Inoshanda Sisitimu yeiyo Usuario Linux pamusoro peimwe «Unidad USB».
Kuti uwedzere ruzivo urwu pa MX Linux nemidziyo yayo, tinokukoka iwe tinya pane zvinotevera link uye / kana kuverenga edu apfuura akatevera zvinyorwa:
1 MX Snapshot: Snapshot Chishandiso
1.1 Matanho apfuura uye mazano usati washandisa MX Snapshot
1.1.1 Zvakatora matanho
1.2 Mashandisiro eMX Snapshot?
MX Snapshot: Snapshot Chishandiso
Matanho apfuura uye mazano usati washandisa MX Snapshot
Matanho akatsanangurwa uye akakurudzirwa pazasi ndeaya a MX Linux mushandisi mushure gadza, gadzirisa, gadzirisa uye gadzirisa su Distro MX Linux sekuda kwako, unogona kubudirira kugadzira Pindura iyo inobvumira, pakati pezvimwe zvinhu, kurumidza kudzorera zvakafanana mune chero mamiriro ezvinhu anoitendera, kudzivirira kushandisa iyo yekutanga Distro kubva pakutanga uye kutanga zvachose zvakare. Kana kana, iwe uchida share yako Respin nevamwe, chero chikonzero, sekugadzira Nharaunda inomukomberedza.
Nemaoko bvisa zvese zvisina basa: Ini ndakangosiya mumafolda aripo enzira «/ imba /…», iwo ega kana mafaera andiri kuda kusevha uye / kana kugovana nevamwe Rangarira kuti mafaera mashoma akaisirwa iwo madiki iyo inogadzirwa ISO ichave. Izvi zvinoshandawo kunyorera, kureva kuti, mashoma mashandisirwo akaverengerwa kana madiki iwo zvaari, zvirinani kuzove kuchengetedza inonzwisisika ISO saizi yekurodha pasi uye kushandisa pane diki USB Memory Drives.
Dzorera zvoga izvozvo: Nechinangwa ichi, kushandiswa kweanotevera MX Linux kunyorera uye kumwe kunyorera kwekunze kwakakodzera: MX Kuchenesa (MX Kuchenesa) uye BleachBit. Shandisa zvese zviri zviviri pakukwanisa kuchenesa, uye iyo yekupedzisira mune yako yakajairwa mushandisi modhiyo se "mudzi".
Disable / Disable ese asina basa masevhisi: Nechinangwa ichi, kushandiswa kweanotevera MX Linux kunyorera uye kumwe kunyorera kwekunze kwakakodzera: Iyo yechisimba application "Session uye Kutanga" ye "Kugadziridza Menyu" yeXFCE uye yekunze application Stacer mune yayo sarudzo "Services" . Uye zvakare, Stacer inotibvumidza isu kuti tiite yakanakisa debugging yeiyo log mafaira (* .log) mune yayo "System Kuchenesa" sarudzo.
Sevha mushandisi marongero uye maitiro: Kana iwe uchishuvira kuchengetedza uye kugara nhaka chikamu kana zvese zvakaitwa muMX Linux mushandisi yakagadzirwa pane vashandisi vatsva kuti vagadzirwe muDistin, unofanirwa kuisa maforodha anodiwa uye mafaera ari munzira «/ kumba / myuser / »mukati megwara« / etc / skel ». Semuyenzaniso:
Chero chipi zvacho chaunofunga chakakosha, semuenzaniso: .conky, .fluxbox, .kde, pakati pevamwe.
Chero chipi zvacho chaunofunga chakakosha, semuenzaniso: .bar, .xinitrc, .xscreensaver, pakati pevamwe.
Mashandisiro eMX Snapshot?
Shandisa MX Mufananidzo zviri nyore chaizvo. Kana yangovhurwa (yaurayiwa), inoratidza zvinotevera pachiratidziri chayo chekutanga, icho chinogona kuonekwa mumufananidzo wepamusoro wepamusoro:
Space mu / (mudzi): Kuratidza kuti ingani nzvimbo inogarwa muOS yese yekumanikidza.
Nzvimbo yemahara mu / kumba: Kuratidza apo nzvimbo yemahara inowanikwa pane OS Imba
Mufananidzo nzvimbo: Kuti uratidze nzira yakasarudzika uye / kana kuratidza yako, panogadzirwa ISO.
Zita remufananidzo: Kuti uratidze zita rekutanga uye / kana kuratidza rako, kuti iyo ISO igadzirwe.
Pachirongwa chinotevera, sezvinoonekwa mumufananidzo wepamusoro, zvinotenderwa kuratidza kuti ndeapi maforodha emushandisi akasikwa asingade kutsigirwa, kana sarudzo ikasarudzwa Akachengetedzwa maakaundi (ekuchengetedza ega). Iyi sarudzo inobvumira mushandisi akagadzirwa kuti arambe akanyorwa uye achiwanikwa mu Pindura zvese zviri mumodi «En vivo» (rarama) sekunge uchiisa zvakafanana.
Kana zvadaro, sarudzo inosarudzwa "Default maakaunzi adzoreredzwa (kugovera kune vamwe)", hapana account yemushandisi ichachengetwa (kuteedzerwa) uye nekutadza, iyi sarudzo ichagadzirisa zvakare mapassword e "Demo" y "Mudzi" kune avo vanowanikwa nekusarudzika mu MX Linux.
Uyewo, MX Mufananidzo inopa zvinotevera zvirongwa zvekumanikidza: lz4, lzo, gzip uye xz, yekupedzisira iri inonyanya kushanda kana uchimanikidza mafaera kuti aiswe muIO.
Kune vamwe vese, nekudzvanya iyo bhatani «rinotevera» iyo ISO ichagadzirwa uye tinogona kuipisa kuDVD kana USB tichishandisa MX Rarama USB Mugadziri kubva MX Linuxkana Balena Etcher, Rosa Mufananidzo Munyori, Ventoy kana the raira "dd" kubva kune chero imwe Kugoverwa kweGNU / Linux, kana kushandisa Rufus kubva Windows.
chitsamba: Kana iwe uchida gadzirisa (gadzirisa) sarudzo dze tanga menyu (bhuti) yeNew Respin iyo faira inofanirwa kugadziriswa gadzirisa iyo mx-snapshot.conf faira zviri munzira "/ etc" uye isa iyo sarudzo "edit_boot_menu" en "Uye ndizvo". Izvi zvinoreva kuti pachave paine hodhi yekugadzirisa yeiyo faira «isolinux.cfg» kwatinokwanisa kuzvigadzirisa, kuitira kuti kana iyo Respin yatanga, semuenzaniso, zita idzva retsika yedu Respin rinobuda, panzvimbo pe, "MX Linux" iyo inouya nekutadza.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve MX Linux kupindura tinya pane zvinotevera zvinongedzo:
MX Linux Foramu - MX Desktop Mhinduro (Chinyorwa)
MX 19.2 Yekutanga Shanduro Yemunhu Pindura
Sourceforge - Nharaunda Inopindura
Uye pano, kudzidza zvakawanda nezve Unofficial MX Linux Pindura akadanwa Zvishamiso, chirongwa chakatsiva yapfuura inonzi Vashandi vemumigodhi maererano Ubuntu 18.04 Using Systemback.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezve chimbo chekushandisa MX Linux kudana «MX Snapshot», inova yakanaka software utility iyo inobvumidza kuumba yega uye inogadzirika MX Linux Respin, ndiko kuti, bootable ISO mufananidzo (rarama) iyo inogona kushandiswa senzvimbo yekudzoreredza, yepakati yekuchengetedza uye / kana kugovera; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » MX Snapshot: Ungagadzira sei wega uye inogadzirika MX Linux Pindura?
Ndiri kureva, ini handigone kugadzira mifananidzo yechero linux distro yakaiswa papc yangu?
Kwazisai, RocoElWuero. Kwete, chishandiso ichi chizvarwa cheMX Linux, uye hachina kuvakwa kuti chishande pane mamwe maDistros. Izvo, kana zvikaitwa, zvinogona kunge zvichishamisa, nekuda kwekushanda kwayo kwakanaka uye kuita.
Ronald K. akadaro
Habe das mit dem Schnappschuß schon begriffen und schon einige erstellt, was auch wunderbar funktioniert hat unter mx18.3 konnte ich die ISO Datei auch prima auf eine andere Festplatte installieren ohne das es Probleme gab, - - Aber unter MX 19.3 kann ich zwar Schnappschuß erstellen und erhallte dann auch eine funtionierende ISO Datei die auch startet und bis zu einem Punkt abläuft, wo mich das Installprogramm nach Loginname und Passwort fragt, was ich auch eingebe und dann erscheint ein Dollerzeichen $, ich nicht weiter… abie gesagt nur bei mx19.3 bei
mx 18.3 lauft alles bis zum Destoppmemeschirm weiter dann erscheint das Install brogramm und ich kann es auf Festplatte installieren - bei mx 19.3 geht das nicht hat nicht einmal geklappt was soll ich da beim Dollerzeichen eingeben ??? Bitte helft mir ich kuwana MX Linux einfach toll. Danke
Pindura kuna Ronald K.
Grüße, Ronald. Ich habe ndeye nicht ganz verstanden. Ich habe jedoch mein eigenes Respin (rarama uye unogadzira Snapshot) von MX Linux 19.3, genannt MilagrOS, und funktioniert ohne Probleme. Ich weiß nicht genau, was Ihr Problem ist, aber ich kann mir vorstellen, dass, wenn Ihr Respin Sie irgendwann nach einem Kennwort fragt, es das Standardkennwort sein sollte, in MX Linux, das, glaube ich, «demo» oder «root» ist, andernfalls sollte es das sein, die Sie dem Benutzer zugewiesen haben, der vor dem Respin angelegt wurde. Ich weiß nicht, ob is nützlich sein wird, aber dies ist die URL meines Respins, falls Sie is erforschen und sehen möchten, wie is nützlich sein kann: https://proyectotictac.com/distros/
Kwazisai, Ronald. Handina kunyatsonzwisisa. Nekudaro, ini ndine yangu repin (inorarama uye inogadzirika snapshot) yeMX Linux 19.3, inonzi MilagrOS uye inondishandira pasina dambudziko. Ndingadai ndisingazive kuti dambudziko nderei chaizvo, asi ndinofungidzira kuti kana pane imwe nguva mhinduro yako ichikubvunza password, saka iyi inofanira kunge iri iyo inouya nekumira, muMX Linux, iyo yandinofunga kuti "demo" kana " mudzi ", kana zvisiri, inofanirwa kunge iri iyo iwe yawakapa kune mushandisi akagadzirwa pamberi pespin. Handizive kana zvichizokubatsira, asi iyi ndiyo url yekufema kwangu kana uchida kuitarisa uye kuona kuti ingabatsira sei: https://proyectotictac.com/distros/
Fedora 34 inoronga kushandisa PipeWire kurira pane PulseAudio
Kali Linux 2020.4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo